Ọkụ ọkụ n'èzí na-enye ọkụ na patio ma ọ bụ ubi gị | Bezzia
Ọkụ ọkụ dị n'èzí iji nye patio ma ọ bụ ubi gị ọkụ
Maria onyekwere | 13/05/2022 18:00 | Ngwa ụlọ
Ị tụrụ aro na njedebe nke oge okpomọkụ gara aga na n'afọ a ka ị ga-arụzigharị oghere ndị dị n'èzí? Malite iwebata ihe na-abụghị naanị na-agbakwunye ha àgwà kamakwa na-eme ka ha na-arụ ọrụ nke ọma. Ihe dị ka olulu ọkụ n'èzí na anyị na-agwa taa.
Ndị braziers bụ kpọmkwem ihe ị na-achọ ka ị nwee ike ịgbatị oge ị na-eji ohere nke ubi ma ọ bụ patio gị. Ha na-akpụ akpụ n'ụbọchị ma na-eme ka oghere dị n'èzí anya na-ekpo ọkụ na abalị oyi Nke okpomọkụ. Megharịa nha ya na ụdị ya na oghere dị n'èzí gị wee mee mgbanwe!
1 Ihe kpatara iji tinye brazier n'ime oghere gị
2 Ụdị brazier
3 Ọla na ọdịdị gbara okirikiri
4 Nkume bioethanol braziers
Ihe kpatara iji tinye brazier n'ime oghere gị
Ọ nwere ihe na-efu na oghere dị n'èzí gị? Mgbe ụfọdụ anyị na-enwe mmetụta ahụ mana anyị amachaghị nke ọma ihe ọ bụ na anyị ga-etinyerịrị ka ọ pụọ. Ọkụ ọkụ nwere ike ịbụ ihe ị na-achọ - N'ezie, enwere ọtụtụ ihe mere ị ga-eji tinye otu n'ime imewe oghere dị n'èzí gị:
Ọ na-enye ohere iji ohere dị n'èzí nakwa na abalị kacha oyi nke okpomọkụ.
Na-enye ìhè patios na ubi n'ime abalị, na-enye ìhè na-ekpo ọkụ na-akpachi anya.
Ha na-aghọ ihe mmewere gburugburu kpọkọta ezinụlọ.
Ha na-agbakwụnye àgwà na ịhụnanya ka elu oghere imewe
Ndị na-agba nkụ ma ọ bụ icheku ọkụ Enwere ike iji ha mee ihe n'ọkụ. N'ezie, ọtụtụ atụmatụ na-agụnye otu.
Anyị nwere ike kewaa braziers dabere na ihe ejiri mee ya ma ọ bụ ụdị ha were. Otú ọ dị, anyị ekpebiela ịkụ nzọ na ngwakọ na-akọwapụta ụdị braziers kachasị ewu ewu, ma nke ga-adịrị gị mfe ịchọta.
Ọla na ọdịdị gbara okirikiri
N'ụbọchị ha na-akpa àgwà dị ka ihe ọkpụkpụ dị n'ogige na mgbe anyanwụ dara, ha na-aghọ brazier, na-eme ka ha bụrụ akụkụ zuru oke iji chọọ terrace, patio ma ọ bụ ubi gị mma. Ọkụ ọkụ nwere ntụ ntụ ojii mara mma nke ukwuu, n'agbanyeghị na ọ bụ atụmatụ oxidized kacha mma iji tụgharịa isi wee tinye aka avant-garde na oghere dị n'èzí.
Igwe braziers metal nwere ụdị okirikiri dabara adaba maka ịchọ mma obere oghere n'èzí ebe ọ bụ na ị ga-ahụ atụmatụ site na 51 centimeters na dayameta nke ga-eme ka ọ dịrị gị mfe ịmegharị ya na ndị a. Ị ga-achọ, ee, obere oghere ọzọ iji chekwaa nkụ nke ị ga-ere n'ime ha.
Uru ọzọ ị ga-eburu n'uche nke braziers metal bụ na ha bụ enwere ike ịnweta akụ na ụba; Ị nwere ike ịchọta ha site na € 150. Na mgbakwunye, ha dị ọkụ karịa ndị ọzọ, nke ga-enye gị ohere ịgbanwe ebe mgbe ịchọrọ iji ya n'ụzọ ọzọ.
Nkume bioethanol braziers
Silhouette nke oge a na ahịrị dị ọcha nke ọkụ ọkụ nkume ga-agbakwunye ụdị ọ bụla n'èzí, nnukwu ma ọ bụ obere. Ojiji nke bioethanol dị ka mmanụ ụgbọala, ga-eme ka iji ya dị mfe ma dị ọcha.
Ị nwere ike ịchọta ụdị braziers na okirikiri ma ọ bụ akụkụ anọ. Ndị mbụ na-atọ ụtọ karịsịa na oghere dị n'èzí nwere ọnọdụ ahụ iru ala na nke amaara nke ọma. Ndị akụkụ anọ nke e ji nkume kpuchie, ka ọ dị ugbu a, na-enye ọmarịcha ihe ịchọ mma.
N'agbanyeghị atụmatụ ha, ndị a na-ekpo ọkụ n'èzí juputara na nkume iji ma nha na agba nke ndị a na-egwu egwu na ụdị. A na-ezube nkume ndị a iji zoo ọkụ ọkụ nke, na mgbakwunye na biotenaol, nwere ike ịrụ ọrụ na mmanụ ndị ọzọ. Ọtụtụ n'ime braziers nwere mmalite akwụkwọ ntuziaka, mana enwere ike ịchọta ha na mmalite eletrik. Kedu ọnụ ahịa? Otu, n'ezie, karịa naanị.
Ejiri kọnkịtị ma ọ bụ nkume mee na mpụga, braziers ndị a dị arọ karịa braziers ọla. A haziri ndị buru ibu ka ha nwee a ebe edobere n'ogige, ya mere, ị ga-eche nke ọma banyere otu esi etinye ha n'ime nhazi ahụ.
Ụfọdụ oche na-aga n'ihu, ụfọdụ sofas ubi ma ọ bụ ụfọdụ oche iji gbaa brazier dị n'èzí ma hazie oghere gị n'èzí. Ị gaghị achọ karịa ka ị na-ekpori ndụ n'abalị okpomọkụ. Wepụta izu ike n'ìhè ọnwa ma ọ bụ wepụta oge gị na ndị ezinụlọ na ndị enyi gị abalị okpomọkụ n'akụkụ ọkụ na anwansi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Ngwa ụlọ » Ọkụ ọkụ dị n'èzí iji nye patio ma ọ bụ ubi gị ọkụ
Ihe na-ewu ewu na ịchọ agbamakwụkwọ 2022